China Steel Rail TR45 YeChitima fekitori nevagadziri |Zhanzhi
Simbi njanji ndicho chinhu chikuru chenjanji.Basa rayo nderekutungamirira mavhiri ekukunguruka kuti aenderere mberi, kutakura kudzvinyirirwa kukuru kwemavhiri uye kuchiendesa kune vanorara.Rail inofanirwa kupa inoenderera, yakatsetseka uye kushoma kuramba inotenderedza nzvimbo yemavhiri.Mune njanji yemagetsi kana otomatiki block chikamu, njanji inogona zvakare kushandiswa seye track rekiti.
1) Nyaya: Q235, nezvimwe.
2) Giredhi: TR45, yakagadzirirwa
Simbi njanji yakakamurwa kuita njanji, njanji dzakareruka, conductive njanji uye crane njanji.Iyo muchinjiko-chikamu chimiro chenjanji inoumbwa neI-yakaita chikamu chine yakanyanya kubhenda kuita, musoro wenjanji, chiuno chenjanji uye pasi penjanji.
(1) njanji yesimbi yenjanji
Yakaderera alloy simbi njanji inogadzirwa pahwaro hwekabhoni njanji.Yakakwira kabhoni uye yakaderera alloy simbi njanji ine yakakwira simba, zvirinani kupfeka kuramba, kumanikidza kuramba, brittle fracture kuramba uye kuneta kuputsika kuramba kupfuura kabhoni njanji.Mhando dzenjanji dzekushandisa njanji i38, 43, 50, 60 uye 75kg/m, zvichingodaro. Kutarisisa kunofanirwa kubhadharwa kudzivirira mavara machena panguva yekugadzirwa kwenjanji.
(2) Chiedza chesimbi
Inonyanya kushandiswa mumigodhi uye masango, uye marudzi ayo ari 5,8,11,15,18 uye 24 kg/m.Chiedza chesimbi njanji inonyanya kugadzirwa nekabhoni simbi, uye mashoma anogadzirwa neakaderera alloy simbi.Njanji dzesimbi dzakareruka dzinoshandiswa mumigodhi, pasi pevhu uye nzvimbo dzemasango dzinoda kusimba, saka alloy alloy zvinhu zvakaita semhangura, chromium, phosphorus uye vanadium inowedzerwa kusimbi.
(3) Conductive simbi njanji
Simbi yesimbi inoshandiswa kuitisa magetsi muchitima chepasi inoda conductivity yakanaka, kureva kuti, resistivity pa 15 ℃ iri pasi pe 0.125 μ ω m.Yakagadzirwa neyemhando yepamusoro yakaderera-kabhoni aluminium yakaurayiwa simbi.
(4) Crane simbi njanji
Iko kuumbwa kwemakemikari uye maitiro ekugadzira akakosha-chikamu-chikamu simbi njanji anoshandiswa kune akasiyana crane gwara renjanji akafanana neaya esimbi njanji.Mhando idzi QU70, QU80, QUl00, QUl20 zvichingodaro
Basa resimbi njanji ndere kutungamira mavhiri ekutenderedza stock kuti aenderere mberi, kutakura kudzvanywa kukuru kwemavhiri uye kuiendesa kune vanorara.Simbi njanji inofanirwa kupa inoenderera, yakatsetseka uye kushoma kuramba inotenderedza nzvimbo yemavhiri.Mune njanji yemagetsi kana otomatiki block chikamu, njanji inogona zvakare kushandiswa seye track rekiti.